ईच्छाराजकै शैलीमा बराह सहकारीमा करोडौँ घोटाला : बचतकर्ताले १५ हजार माग्दा समेत पाएनन् ! | Diyopost - ओझेलको खबर ईच्छाराजकै शैलीमा बराह सहकारीमा करोडौँ घोटाला : बचतकर्ताले १५ हजार माग्दा समेत पाएनन् ! | Diyopost - ओझेलको खबर
दियो पोस्ट सोमबार, पौष २६, २०७८ | १६:५८:१७
काठमाडौं । बचतकर्ताको ८ अर्ब भन्दा बढी रकम ठगी गरेपछि पूर्व सांसद तथा सिभिल समुहका अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङ यतिबेला जेलको चिसो हावा खाइरहेका छन् ।
उनका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ र सिभिल समुहका अध्यक्ष तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सिभिल समुहकै शैली पछ्याएर सहकारीमा करोडौँ रकम हिनामिना गर्ने एक सहकारी सञ्चालकहरुले भने उन्मुक्ति पाएको खुलाशा भएको छ ।
तर, बचतकर्ताहरुले १५ हजार रुपैयाँ समेत माग्दा फिर्ता नपाएपछि ठूलो घोटाला भएको आशंका गरिएको छ । सिभिल समुहकै शैलीमा यो सहकारी समेत बराह समुह अन्तर्गत राखिएको छ । तर, बचतकर्ताले आफ्नो रकम रहेको सहकारीलाई कुनै व्यक्तिको समुहमा लगेर गाभिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । संचालकहरुले बराह ग्रुप अफ कम्पनि अन्तर्गत सहकारीलाई राखेका छन् । जसको धरानमा बराह इण्डस्ट्रिज प्रालि अन्तर्गत भानुचोकमा र धनकुटे रोडमा करोडौंको सपिङ कम्पलेक्स सञ्चालन गरेको छ । यस्तै काठमाडौंको न्यूरोडमा, पोखराको चिप्लेढुङ्गा र चितवनको नारायणघाटमा शाखाहरू छन् । विदेशमा हङकङको जोडर्नमा, दुबईमा र बेलायतको अल्डरसटमा पनि शाखा छन् । स्रोतका अनुसार सहकारी संचालकहरुले बचतकर्ताको रकम घर जग्गामा लगानी गरेका कारण रकम अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारीको कारोबारमा समेत रोक लगाएको पाइएको छ ।
धरान १६ निवासी प्रदीप अधिकारीले बराह सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । तर, आफूले जम्मा गरेकै रकमबाट १५ हजार रुपैयाँ निकाल्न जाँदा सहकारीका कर्मचारीले रकम छैन भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।
बराह सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने कमला लिम्बु तवेबुङ यतिबेला गम्भिर विरामी छिन् । बोल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेकी उनले समेत रकम पाएकी छैनन् । त्यस्तै उनकै देवरले २० लाख, अमाजु दिदी आशा राईले ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । उनीहरुले चार महिनादेखि धाउँदा पनि एक पैसा पाएका छैनन् ।
त्यस्तै धरान–१६ निवासी कृष्णशोभा राई र सरिता राई सासू–बुहारीलाई सहकारीले तीन साताअघि नै कुपन दिएर आइतबार पैसा लिन आउनु भनेर बोलाएको थियो तर, रकम लिन जाँदा सहकारीले दिन सकेन ।
सहकारीका कर्मचारीले रकम माग्न आउनेहरुलाई टोकन दिने र केहीदिनमा बोलाउँछौँ भन्दै रित्तै फर्काउने गरेको पाइएको छ । पैसा लिन जाँदा आज पैसा छैन भन्दै रित्तो हात फर्काउने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
बराह समुहमा सहकारीसहित अभिमत सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेड, दुबईमा अल बराह मिनी मार्केट एलएलसी, बराह बालसंसार, बराह ज्वेलरी इण्डस्ट्रिज प्रालि, बराह फेमिली किचन, चितवनमा नारायणी बराह ज्वेलरी नारायणी, गोर्खा बराह ज्वेलरी पोखरा, इन्द्र बराह ज्वेलरी हङकङ, इन्द्र बराह ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कृपा दृष्य डिजिटल प्रालि रहेका छन् ।
यी सबैको अध्यक्ष भने शिव लामिछाने हुन् ।
सोमबार, पौष २६, २०७८ | १६:५८:१७